Madaxweyne Imaaraat ka intan uun ma ka helnaa? W/Q. Cabdifataax Rashiid Maxamed
Tuesday 12th March 2019 07:02:43 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Waxa Imaaraatka ku sugan Madaxweyneheenna mudane Muuse Biixi oo martiqaad rasmi ah ka helay madaxda dalkaas xukuma
. Waxa xusid mudan in si heer sare ah loogu soo dhaweeyay dalka Imaaraatka. Sababtuna waxa ay noqonaysaa labada dal oo xidhiidh wanaagsani ka dhexeeyo; dhawaanna wada galay heshiisyo waawayn oo ay ka mid yihiin dekedda iyo madaarka Berbera; heshiiskaas oo lacag ahaan, wakhti ahaan iyo qaddiyad ahaanba muhiim u ahaa labada dal.
Dekedda waxa loo ballaadhinayay suuqa Itoobiya oo xataa saami ayaa laga siiyay heshiiska. Laakiin ilaa iminka Itoobiya lagama hayo war cad oo ku aaddan sida ay u kordhinayaan isticmaalkooda dekadda, waxaana ay u muuqataa in aan qorshaheeda mustaqbal ugu jirin in ay si buuxda u isticmaasho dekadda Berbera. Markaa miyaanay noqonayn dekedda Berbera in ay kala soo degto uun wixii saanad ciidan ah ama alaabta dawladdu leedahay ee aan loo baahnayn in la baadho iyo wixii deeqaha caalamka ah? Marka Itoobiya oo aynnu dekadda u ballaadhsanaynay ay Casab, Jabbuuti iyo dekado kale mudnaanta siiso, miyaan arrinkeennu noqonaynquud aan jirin qoryo u guro!